Samachar Batika || News from Nepal » फिल्म बनाउँनेहरु के सम्म गर्ने रहेछन् : साम्राज्ञीले आफुमाथी भएको सबै खुलाइन् ! [भिडियोसहित]
फिल्म बनाउँनेहरु के सम्म गर्ने रहेछन् : साम्राज्ञीले आफुमाथी भएको सबै खुलाइन् ! [भिडियोसहित]
काठमाडौ । नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले आफुले काम गरेका ८ मध्ये तीन वटा फिल्म ब्यानरबाट अति नै दु’व्यवहार भोगेको बताएकी छिन् । तर उनले आफु माथि नराम्रो गर्ने फिल्म तीन ब्यानरका नाम भिडियोमा उल्लेख गरेकी छैनन् । ’१७ बर्षको उमेरमा चलचित्रमा डेव्यु गरें । त्यो बेला धेरैले हाम्रो क्षेत्र सानो छ कति कुरा बाहिर निकाल्नु हुन्न, भन्नु हुन्न भन्थें । काम नपाउने, चलचित्र नै नपाउने जस्तो कुरा पनि गर्थे ।
हरेक चलचित्रको प्रमोशनमा जाँदा सोधिने किन घमण्डी, किन मान्छेले घृ’णा गर्छन् लगायतका प्रश्नले दिक्क हुन्थें । मैंले जति पनि व्यानरसँग काम गरे त्यो मध्ये धेरैसँग काम नदोहोरिनुको कारण उहाँहरुले मलाई गर्ने व्यबहार नै हो । एउटा कलाकारले पाउनु पर्ने सानो सम्मान सम्म यहाँ पाईंदैन । कति पटक ह्यारे’श्मेंट हुन्थ्यो । तर पनि त्यो सब कुरालाई जोक जस्तो मानेर मुहारमा हाँसो ल्याएर काम गर्नुपथ्र्यो ।
कतिसम्म भयो भने समयमा खान र पानीको व्यवस्था नहुँदा यसको बारेमा बोल्यो भने सबैको अगाडी अपशब्द प्रयोग गरेर बोलिन्थ्यो । आ’क्रम’ण गर्ने शैलीमा आउँथे, धेरै बेर रुन्थे अनि केहि नभए जस्तो गरेर फेरी मेकअप गरेर सुटिङ्ग ज्वाइन गर्थें किनकि मलाई कामसँग प्रेम छ, कामको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मलाई थाह छ र मैले सकेको सय प्रतिशत भन्दा बेसी मेहनत लगाएर नै काम गर्थें ।
’मैंले ५ बर्षको करियरमा ८ वटा चलचित्रमा काम गरेकी छु । तर यो बिचमा मैंले धेरै नराम्रो अनुभव भोगेकी छु । काम गरेका तीन वटा व्यानरमा अति नै नराम्रो व्यवहार भोगेकी छु । जुन सबै म भन्न पनि सक्दिन होला । भन्दै उनी भिडियोमा आएकी छिन् ।
प्रकाशित मिति १५ असार २०७७, सोमबार ०९:३८